[caption id="attachment_2888" align="alignnone" width="311"]
तस्वीर- कविकाे फेसबुक खाताबाट[/caption]
पहिले अधिकांश कविलाई काँधमा झोला भिर्ने, फितावाल चप्पल लाउने, ल्याङ्गफ्याङ्गे शैलीमा हिँड्ने, दाह्री झ्याप्प पाल्ने, हेर्दै वैराग लाग्ने मानिस कवि हो जस्तो लाग्थ्यो । अहिले कवि पनि सफासुघ्घर भएको, चिटिक्क परेका लुगा लाउने, टिकटमा कविता कार्यक्रम हुने भएका कारण कविको पनि भाउ बढ्दै गएको हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले त कविता वाचन गरेरै आम्दानी गर्ने कविहरू पनि छन । हामी बसेको समाज, समाजको चेतना, फेसबुकमा लाइक कमेन्ट आएकै भरमा किताब छाप्न हतारिने कवि जमातलाई हेर्दा तपाईंले भन्नुभएको कविता लेखेर बाँच्न सकिने अवस्था अहिले देखिदैन । त्यसै पनि कविताका किताब दुई तीन हजार प्रति छापिन्छन्, त्यति किताब बिक्री हुन बर्ष दिन पनि लाग्छ । प्रकाशक र बिक्रेता त्यसै पनि बाठा छन, कति बिक्री भयो थाहै हुँदैन । कविता लेखेर बाँच्न त सकिन्छ, आम्दानीको बाटो अरु पनि हुनुपर्यो !
पहिले कविता कम लेखिन्थे, छाप्नका लागि हतारिँदैनथे, ऐलेजस्तो सन्चारको ब्यापकता पनि थिएन । लेख्नेबित्तिकै फेसबुकमा हाल्ने, तुरुन्त प्रतिक्रिया आइहाल्ने अवस्था थिएन । मलाई लाग्दैन, अहिलेको दाँजोमा कवि कम थिए र ती गुणस्तरीय लेख्थे । अहिले पनि गुणस्तरीय कविता लेख्ने कवि नभएका होइनन्, तर नयाँ सिकारु कविहरू रातारात चर्चित हुने आकांक्षाले फेसबुकमा कविता हाल्ने क्रम बढ्दो छ । पहिले कविताले छापिने माध्यम र पढ्ने पाठक खोज्थ्यो, अहिले विभिन्न अनलाइनले पत्रिकाले कविता खोज्छन् । अझ नयाँ प्रयोगका कारण पनि त्यस्तो लाग्न सक्छ तपाईंलाई । स्तरको कुरा फेसबुकलाई आधार मान्नु न्यायोचित होइन । फेसबुकमा देख्नुभएका कविता हेरेर स्तर घटेको भन्नुहुन्छ भने मान्न तयार छु । कविको सङख्या भन्नुहुन्छ, जनसङ्ख्या पनि त बढेको छ नि ! नयाँमा स्तर घटेको मात्र नभएर सोच, शैली, शिल्प , बिम्ब, प्रतीकका नवीन प्रयोग पनि भैरहेका छन् ।
माधव घिमिरेलाई मैले वा तपाईंले जे भने पनि उनी कविवर हुन् । उनी नेपाली साहित्यका (गीत,कविता, निबन्धमा ) एक उचाइ हुन् । त्यो उचाइ उनले लेखेर प्राप्त गरेका हुन् । जसरी भानुभक्त आचार्यले ब्राह्मणले बोल्ने र लेख्ने गरेको संस्कृत भाषालाई छोडेर नेपाली भाषामा रामायण भावानुवाद गरेर एउटा अभियान चलाए ठिक त्यसै गरी घिमिरेले पनि छन्दकवितामा लोकभाषाको प्रयोग गरेर नेपाली कावितासाहित्यको एक चुली बनाए । हो, कुनै आन्दोलनमा उनी तटस्थ बसे, कतै कसैको स्तुति लेखे तर समग्रमा उनले लेखेका कृति र गुणलाई हेर्दा उनी यो समयका हाम्रा निधि हुन् । हामीले जसरी गोपालप्रसाद रिमाल, भुपी शेरचन र बैरागी काइँला जस्ता गद्यकविताका कविहररू पायौँ त्यसैगरी नेपाली छन्दकवितामा एक्लो माधव घिमिरे पायौँ । कविले पहिले आफ्नालागि कविता लेख्ने हो । आफुलाई चित्त बुझेपछि मात्र अरुलाई ग्राह्य होला । कतिपय कविहरू भन्छन् - जनताका लागि, सर्वहारा वर्गका लागि वा भुइँमान्छेका लागि कविता लेख्छु, अरुकालागि लेखिएका त कवितै नहुन पनि सक्छन् । मेरो हकमा चाहिँ सोध्नुभएको हो भने, पहिले आफ्नैलागि लेख्नेगर्छु ।
गद्य कवितामा पनि छन्द हुन्छ नि ! मात्रा र गण मिल्नु मात्रै छन्द होइन । छन्द भएन भने गद्य कविता बन्दैन ! यद्यपि गद्य कवितामा देखिने छन्द शास्त्रीय छन्दजस्तो चाहिँ हुँदैन । जो सङ्गीत हुन्छ कवितामा, त्यो छन्द हो । मजस्तो न कसैको समर्थन, न कसैको बिरोध गर्ने मानिसलाई बिरोधी देख्नु नै दृष्टिदोष हो भन्छु म त ! अब परम्परा भन्नुभो नि! राम्रा परम्परा त कसले छोडेको छ र ? किन छोड्नु ? अब यति भनिसकेपछि भनिरहनु नपर्ला- म छन्द बिरोधी होइन ।
कविताकै परिवर्तित रूपमा माथि भनिएका जे जे नाम लिएर आउँछन् ती कविता हुन्, तिनलाई ग्रहण नगरी सुखै छैन । महाकाव्यबाट हाइकूसम्म कविताकै स्वरूप हुन् । कविताको सनातन स्वरूप भनेको के हो ? समाज सतीप्रथा मुक्त भयो, दासप्रथा मुक्त भयो अनि कविताले चाहिँ सनातनी परम्परा धान्नुपर्ने ? महाकाव्यका पात्र धनवान्, बलवान्, सामन्त वा राजकुमार नै हुनुपर्ने ? सनातन स्वरूपलाई त भानुभक्तले नै खारेज सकेकाछन् ! तपाईंले उल्लेख गर्नुभएकाे सनातन स्वरुपलाई परिमार्जन गरेर आधुनिक स्वरूपमा पो लैजानुपर्छ त !
« अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए राजीनामा
इलामका एम्बुलेन्स चालकहरूलाई सम्मान »